06:20 - 29 Jun
Fariinta Xoghayaha Guud Maalinta Caalamiga ah ee Nabad ilaaliyayasha QM 2018
Bishii May 29-keedii, 1948, Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa ogolaaday howlgalkii ugu horeeyay ee nabad ilaalin – Hey,ada gormeerka xabad joojinta Qaramada Midoobay ee Bariga Dhexe.
Sahminta biyo-dhuleed ayaa ka socda Baydhabo, koonfurta-bartamaha Soomaaliya.
Sahminta biyo-dhuleed ayaa ka socda Baydhabo, koonfurta-bartamaha Soomaaliya. UNSOS ayaa fulineysa qodida ceel-biyood iyadoo isticmaaleysa tiknoolajiyad casri ah oo ay la socdaan sahminta jiyoofisikada dhulka si loo helo meelaha suuragalka u ah biyaha badan.
Muqdisho –Hay’adaha Qaramada Midoobay (UN) ayaa toddobaadkan siminaar hal maalin ah Muqdisho ugu qabtay ganacsatada Soomaaliyeed, ee looga gol lahaa in lagu baro sidii ganacsi loola sameeyo hay’adaha UN-ta ku sugan Soomaaliya.
UNSOS OO TAAGEERTAY DADAALLO LAGU SOO CELINAYO DHOOLACADAYNTA WAJIYADA SOOMAALIDA QABA CILLADAHA FARUUR DILAACA
Baydhabo– Koox caafimaad oo ka kooban shaqaale ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), hay'adda samafalka dillaaca bishimaha ee 'Smile Train', iyo xarunta Horumarinta Adduunka ee Bancroft, ayaa fuliyay qaliinno dibnaha iyo afka oo bi
New York - Waxaynu ku jirnaa waqti aad ugu muhiimsan xuquuqda haweenka. Sinnaan la’aanta soo jireenka ah ee xagga qaaba bulshada ee horseeday dulmi iyo takoor ayaa si aan waligeed hore u dhicin loo soo bandhigayaa oo loo kashifayaa.
WAFDI KA SOCDA QAYBTA TAAGEERADA HAWLGALLADA NABAD EE MIDOWGA AFRIKA OO BOOQDAY SOOMAALIYA
Muqdisho–Wafdi ka socda Qeybta Hawlgalka Taageerada Nabadda ee Midowga Afrika (PSOD) ayaa ku sugan Soomaaliya si ay u qiimeeyaan hawlaha nabad-ilaalinta iyadoo xil-wareejinta mas’uuliyadaha AMISOM lagu wareejinayo ciidamada amniga qaranka Soomaaliya.